Tag: scorecard | Martech Zone
Zoma Janoary 22, 2021 Zoma Janoary 22, 2021 Molly Clark
Ny atiny famoronana avo lenta dia zava-dehibe amin'ny marketing nomerika. Io no solika ho an'ny automatisation marketing, dokam-barotra nomerika, ary media sosialy. Na izany aza, na eo aza ny anjara toeran'ny mpamorona atiny ivelany, ny fanambinana ny c-suite dia liana amin'ny asa andehanana. Ny mpitarika sasany dia mahita ny fehin-kevitra voalohany, ary ny ankamaroany mahita ny vokany, saingy vitsy no mahalala izay mitranga eo anelanelany. Betsaka ny zavatra mandeha ao ambadiky ny seho: fanaovana laharam-pahamehana ny tetikasa, ny fampifandanjana ireo loharanom-pahalalana,